Fri, Jul 10, 2020 at 6:16pm
वर्षका कारण ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द #आहा खबर# म्याग्दी पहिरो अपडेट: ३ जनाको मृत्यु, ३१ बेपत्ता #आहा खबर# शुक्रबार डलरको भाउ कति ? #आहा खबर# भदौबाटै बहुप्रतिक्षित नेसनल पेमेन्ट गेट-वे सञ्चालनमा आउने #आहा खबर# सरकारले अनुमति दिए पनि चलेन सार्वजनिक यातायात, मध्याह्न यातायात व्यवसायीको बैठक बस्दै #आहा खबर# पाेखरामा पहिराबाट ६ जनाकाे मृत्यु, ११ जना घाइते #आहा खबर# नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक थप सात दिनसम्मका लागि स्थगित #आहा खबर# ‘अख्तियारको सहसचिव’ भन्दै ठगी गर्दै हिँडेको 'ज्योतिष' अर्जुन क्षत्री पक्राउ #आहा खबर# ९९.७ प्रतिशत कोरोना संक्रमितमा लक्षणनै छैन #आहा खबर# प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडकाे जित #आहा खबर# अमेरिकाको नयाँ भिसा नीतिका कारण दश हजार नेपाली विद्यार्थी मारमा #आहा खबर# काठमाडौँका यी ८ स्थानमा आज बत्ती जाने #आहा खबर# एक हप्तामै लिगे १६ सयले श्रम स्वीकृति #आहा खबर# म्याग्दीमा पहिरोले घर बगाउँदा दुई परिवारका ७ जना बेपत्ता #आहा खबर# मनसुन थप सक्रिय भएसँगै गृहमन्त्रालय ‘हाई अलर्ट’मा #आहा खबर#
सलमान सर्वाधिक कमाउने बलिउड कलाकार, अक्षय कुमार दोश्रो
शुक्रबार, मंसिर २१, २०७५ साल
एजेन्सी, २१ मङ्सिर फोर्ब्स म्यागेजिनले सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने भारतीय सेलिव्रेटीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सर्वाधिक कमाई गर्ने १०० सेलिब्रिटीको नाम सार्वजनिक गर्दै फोर्ब्सले उनीहरुको कमाई पनि सार्वजनिक गरेको हो । यो सूचीको सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा बलिउड नायक सलमान खान छन् । सलमानले चलचित्र, रियालिटी शोको माध्यमबाट यो बर्ष २ सय ५३ करोड कमाई गरेका छन् । यस्तै, नायक..
'कमाइ'को मामलामा कपिल शर्मालाई पछि पार्दै सुनील, भारती र अभिषेक
बिहिवार, मंसिर २०, २०७५ साल
एजेन्सी, २० मङ्सिर चर्चित फोब्र्स म्यागेजीनले सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने भारतीय कलाकारको लिस्ट जारी गरेको छ। यो लिस्ट १ अक्टोबर २०१७ देखि ३० सेप्टेम्बर २०१८ कोबीचमा उनीहरुले कमाएको पैसाको आधारमा जारी गरिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। यो लिस्टमा भारतीय टेलिभिजनका कलाकारको कमाइ उल्लेख गरिएको छ। यो लिस्टमा ९ टेलिभिजन आर्टिस्टले आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न सफल भएका छन्। कमेडियन भारतीय सिंहमा बृद्धि भएको छ।..
‘जीरो’को दोस्रो गीत रिलिज, सलमान–शाहरुख एउटै पर्दामा (भिडियोसहित)
मंगलवार, मंसिर १८, २०७५ साल
एजेन्सी, १८ मङ्सिर शाहरुख खानको आउन लागेको फिल्म ‘जीरो’को दोस्रो गीत रिलिज भएको छ । यही डिसेम्बर २१ मा रिलिज हुन लागेको फिल्मको दोस्रो गीत इश्कबाजी रिलिज भएको हो । गीतमा एउटै पर्दामा बलिउडका दुई खान सलमान खान, शाहरुख खानसँगै टप कोरियोग्राफरहरु गणेश आचार्य, रेमो डिसुजा पनि देखिएका छन् । इरशाद कामिलको शब्दमा अजय अतुलले संगीत भरेको गीतमा सुखविन्दर सिंह र दिव्या..
दिपक कलालको घोषणा, 'राखी सावंत र मेरो विवाह खर्च ७० करोड'
आईतवार, मंसिर १६, २०७५ साल
एजेन्सी, १६ मङ्सिर राखी सावंत र दिपक कलाल आफ्नो हाइभोल्टेज ड्रामाका कारण अहिले चर्चामा छन्। दुबैले ३१ डिसेम्बरमा विवाह गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यस विषयमा कुरा गर्नका लागि दिपक र राखीले मुंबईमा एक पत्रकार सम्मेलनकै आयोजना गरेर यस बारेमा बताएका थिए। यिनीहरुले अश्लिल शब्दसहित मिडियाका सामु गाली गलौज समेत गरिरहे। दिपकले उक्त सम्मेलनमा भने, हाम्रो विवाहको बजेट धेरै छैन जम्मा ७० करोड छ।..
‘द कपिल शर्मा शो’को प्रोमो रिलिज, हँसाउने शोको भावुक बनाउने प्रोमो (ट्रेलरसहित)
शुक्रबार, मंसिर १४, २०७५ साल
मुम्बइ, १४ मङ्सिर सोनी टेलिभिजनले शोको नयाँ सिजनको प्रोमो रिलिज गरेको छ । २३ अप्रिल २०१६ मा सुरु भएको शो एक वर्षअघि बन्द भएको थियो । त्यसपछि फेमिली टाइम विथ कपिल लिएर आएका कपिल शर्माको नयाँ शो भने चलेन । अहिले कपिल पुरानै लोकप्रिय शो लिएर आउँदैछन् । कपिलको शोमा पहिलो पाहुना बनेर सलमान खान जाने चर्चा थियो । तर, पछिल्लो समय..
बहुप्रतिक्षित बलिउड चलचित्र ‘२.०’ एकसाथ विभिन्न १४ भाषामा प्रदर्शन हुँदै
बिहिवार, मंसिर १३, २०७५ साल
एजेन्सी, १३ मङ्सिर बिहीबारबाट बहुप्रतिक्षित बलिउड चलचित्र ‘२.०’ प्रदर्शना आएको छ । १४ वटा भाषामा निर्माण गरिएको यो चलचित्र भारतमा मात्रै ६६ सय भदा बढी हलमा एकसाथ प्रदर्शनमा आएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। रजनिकान्त अभिनित यो चलचित्र बलिउडकै महंगो चलचित्र हो। चलचित्रमा ४ सय ५० करोड भन्दा बढी लगानी गरिएको बताइएको छ । यो रजनिकान्तको ‘रोबोट’ चलचित्रको सिक्वेल हो। चलचित्रमा बलिउड..
अन्तत: ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ हेर्ने दर्शकसँग आमिर खानले मागे माफी
बुधबार, मंसिर १२, २०७५ साल
एजेन्सी, १२ मङ्सिर फिल्म ठग्स अफ हिन्दोस्तान बक्स अफिसमा फ्प भयो । फिल्मबाट जे आशा गरिएको थियो त्यसको उल्टो नतिजा आयो । अमिताभ बच्चन, आमिर खान जस्ता चर्चित अभिनेताले पनि फिल्मलाई हिट बनाउन सकेनन् । दर्शकको अपेक्षाअनुसारको नतिजा दिन नसकेपछि दुखी आमिर खानले फिल्म हेर्ने दर्शकहरुसँग माफी मागेका छन् । आमिरले भने ‘म ठग्स अफ हिन्दोस्तानको साथमा जनताको अपेक्षा अनुसार सही बन्न..
सलमान खानपछि शाहरुख खानले पनि पाए धम्की, निवास वरपरको सुरक्षा व्यवस्था कडा
मंगलवार, मंसिर ११, २०७५ साल
एजेन्सी, ११ मङ्सिर सलमान खानपछि बलिउडका बादशाह शाहरुख खानलाई पनि धम्की दिइएको छ । उनलाई कलिंगा सेनाले धम्की दिएको हो । सो संगठनको उडिसा शाखाले शाहरुख खानलाई हकी वर्ल्ड कपमा आए मुखमा मसी फ्याँक्ने बताएको थियो । जसका कारण भारतीय प्रहरीले उनको सुरक्षाव्यवस्था कडा पारेको छ । कालिंगा समूहका नेता हेमन्त रथले शाहरुख खानको फिल्म अशोकाले उडिसाका स्थानीयको अपमान गरेको बताएका छन्..
‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ फिल्मको चीन प्रमोसनमा कैटरिना कैफ नजाने
सोमबार, मंसिर १०, २०७५ साल
एजेन्सी, १० मङ्सिर कैटरिना कैफ अहिले ‘भारत’ फिल्मको सुटिङका लागि लुधियानामा छिन् । यसअघि उनी अमिर खान र अमिताभ बच्चन अभिनीत ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ मा छोटो भूमिकामा देखिएकी थिइन् । तर, धेरै महत्वाकांक्षा राखिएको यो फिल्म भारतमा फ्लप भयो । यही फिल्म चीनमा रिलिज हुँदै छ, र प्रमोसनका लागि निर्माण पक्षले कैटरिनालाई पनि लैजाने इच्छा देखाएको छ । यसअघि कैटरिना ‘भारत’ फिल्मको..
सिनेमाघरबाट हटाइँदै ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’, १ सय ५० करोड जुटाउन पनि धौ-धौ
आईतवार, मंसिर ९, २०७५ साल
मुम्बइ, ९ मङ्सिर यशराज ब्यानरको ठूलो बजेटको फिल्म ठग्स अफ हिन्दोस्तान सिनेमाघारबाट बाहिरिने अवस्थामा छ । फिल्म रिलिज भएको ६ दिन भइसकेको छ तर अझैसम्म यो फिल्मले१५० करोडको आँकडा पनि पार गर्न सकेको छैन । अब यो फिल्म सिनेमाघरबाट १–२ दिनमै हट्ने फिल्मको व्यवसायका समीक्षकले बताएका छन् । आमिर खानका फिल्मबाट दर्शकलाई धेरै आशा हुन्छ । यसैको नतिजा पहिलो दिन ठग्सले..
बलिउड कलाकार आलोक नाथविरुद्ध मुद्दा दर्ता, मि टु अभियानअन्तर्गत बलात्कारसम्बन्धी आरोप
बिहिवार, मंसिर ६, २०७५ साल
मुम्बई, ६ मङ्सिर : भारतीय प्रहरीले बलिउड कलाकार आलोक नाथविरुद्ध बुधबार मुद्दा दर्ता गरेको छ । मि टु अभियानअन्तर्गत बलात्कारसम्बन्धी आरोप सार्वजनिक भएपछि उहाँविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । भारतमा बढ्दै गइरहेको मि टु अभियानका कारण अन्य केही कलाकारलाई पनि अनुसन्धान भइरहेको र केहीलाई भने कारबाही अगाडि बढाइएको प्रहरीको भनाई छ । एक जना लेखक तथा उत्पादक भिन्टा नन्दले वरिष्ठ कलाकार आलोकलाई..
अमिताभ बच्चनले तिरिदिए किसानको साढे चार करोड ऋण
बुधबार, मंसिर ५, २०७५ साल
एजेन्सी, ५ मङ्सिर बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले भारतको उत्तर प्रदेशका १३ सय ९८ जना किसानको ऋण तिरिदिएका छन् । ऋणका कारण समस्यासँग जुधिरहेका किसानहरुको साढे चार करोड ऋण तिरिदिएको अमिताभले आफ्नो ब्लगमा उल्लेख गरेका छन् । किसानले ‘बैंक अफ इण्डिया’बाट लिएको ऋण एकमुष्ट रुपमा तिरिदिएको ब्लगमा लेखिएको छ । बैंकले ऋण चुक्ताको कागजपत्र अमिताभलाई दिएको छ, जसलाई अमिताभले किसानहरुलाई हस्तान्तरण गर्दैछन् । कागजपत्र..
के सांचै नै रणवीर कपुर र आलिया भट्टले पाँच तारे होटलमा रात बिताएका थिए?
एजेन्सी, ४ मङ्सिर फिल्म ‘ब्रम्हास्त्र’ को शुटिङपछि नै बलिउड अभिनेता रणवीर कपुर अभिनेत्री आलिया भट्टबीच अफेयरको खबर चर्चामा छ। उनीहरु विगत एक वर्षदेखि डेट गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय उनीहरुको एउटा फोटो भाइरल पनि भएको छ। आलियालाई धेरै जसो रणवीरको परिवारसँग देखिन्छ। दुवैले अहिलेसम्म आफ्नो सम्बन्धका विषयमा खुलेर कुरा गरेका छैनन्। तर फोटो भने अर्कै कुराको संकेत गर्छ। यतिबेला आलिया र रणवीरको..
‘मुन्नाभाइ–३’ को सुटिङ सुरु हुँदै, स्क्रिप्टलाई अन्तिम रुप दिन कसरत
एजेन्सी, ३ मङ्सिर राजकुमार हिरानी र अभिजात जोशीको सुपरहिट फ्रेन्चाइजी ‘मुन्नाभाइ–३’ को सुटिङ सुरु हुने भएको छ । फिल्म निर्माण टिमबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सुटिङ आगामी जूनदेखि सुरु हुनेछ । हिरानी र जोशी अहिले यसको स्क्रिप्टलाई अन्तिम रुप दिने काममा व्यस्त छन् । फिल्ममा मुन्नाभाइ र सर्किटको भूमिकामा संजय दत्त र अरशद वारसी नै हुनेछन् । बोमन इरानी पनि फिल्ममा रहनेछन् । हिरानीले..
गोविन्दालाई धक्का दिएर बाहिर पठाउँथे निर्देशक, भन्छन् " न ड्रिंक्स गरेँ न घुम्न नै जान पाएँ"
एजेन्सी, २ मङ्सिर बलिउडका लोकप्रिय अभिनेता गोविन्दाको सुरुवाती दिनको तुलना आजको दिनसँग गर्ने हो भने उनको जीवन घुमिफेरि त्यँही आउँछ जँबाट सुर भएको थियो। एक जमाना थियो जब निर्देशक उनलाई धक्का दिएर निकाली दिन्थे। उनका फिल्म रिलीज हुने संभावना कमैमात्र हुन्थ्यो। तर मेहनत गर्न पछि नपर्ने गोविन्दाले योबीचमा धेरै हिट फिल्म दिए। ‘जतिबेला म फिल्मी लाइनमा संघर्ष गरिरहेको थिएँ, त्यतिबेला म सबै..
एउटै फिल्ममा देखिने भए सलमान र शाहरुख, फ्यानहरु उत्साहित
शुक्रबार, कार्तिक ३०, २०७५ साल
एजेन्सी, ३० कात्तिक बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खान र शाहरुख खान एक साथ फिल्ममा देखिने भएको छ । सलमान र शाहरुखले एक साथ खेल्ने चर्चा चलेपछि उनीहरुको फ्यान निकै खुसी भएका छन् । सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्ममा सलमान र शाहरुख एक साथ फिल्ममा देखिने चर्चा भारतिय मिडियामा चलिरहेको छ । डिसेम्बर २१ मा शाहरुख खानको ‘जिरो’ फिल्म प्रर्दशनीको तयारीमा रहेको छ ।..
दीपिका–रणवीरले बिहेको पहिलो फोटो कहिले सार्वजनिक गर्दैछन् ?
एजेन्सी, २९ कात्तिक बलिउडको ठूलो इभेन्ट दीपिका रणवीरको बिहेको कुनै पनि फोटो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । उनीहरु आज दोस्रोपटक बिहे गर्दैछन् । बिहेको फोटो आफूहरुले नै पहिलोपटक सार्वजनिक गर्ने भन्दै उनीहरुले कुनै पनि पाहुनालाई फोटो सार्वजनिक गर्न दिएका छैनन् । अब भने उनीहरुको फोटो कहिले आउँछ भन्ने निश्चित भएको छ । उनीहरुले बिहेको फोटो आज साँझ ६ बजे (नेपाली समय..
ठग्स अफ हिन्दुस्तानले गर्दा तनावमा आमिर, केही समय पर्दामा नआउने योजना !
एजेन्सी, २८ कात्तिक थ्री इडियट्स, पिके, दंगलजस्ता सुपरहिट फिल्मका कारण दर्शकले आमिर खानबाट निकै नै आशा गर्ने गर्दछन् । पछिल्लो समय प्रदर्शनमा आएका उनको सेक्रेट सुपरस्टारसम्मका फिल्मले दर्शक तथा समीक्षकबाट निकै तारिफ पायो । तर, हाल प्रदर्शनरत उनको महँगो फिल्म ठग्स अफ हिन्दुस्तानले न दर्शकबाट त न समीक्षकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । त्यसकारण अचेल आमिर तनावग्रस्त रहेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका..
‘द कपिल शर्मा शो’को नयाँ सिजनको तयारी पूरा, सलमान खान हुनेछन् पहिलो पाहुना
एजेन्सी, २७ कात्तिक कमेडियन कपिल शर्माको टिभीमा पुनरागमनको तयारी पूरा भएको छ । उनी आफ्नो पुरानो कमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ लिएर टिभीमा फर्किंदैछन् । यो शो सलमान खानले नै निर्माण गर्नेछन् । पहिले चर्चा थियो कि यो शो नोभेम्बरमै प्रसारण हुनेछ । तर तयारी पूरा नभएपछि यसलाई केही पर सारिएको छ । बपिलले यो शोको पहिलो एपिसोड डिसेम्बर १६ मा..
‘बाहुबली’ र ‘सञ्जु’को रेकर्डलाई विजयको ‘सरकार’ले तोड्यो, २ दिनमै १०० करोडको कलेक्शन !
एजेन्सी, २६ कात्तिक दक्षिणको सुपरस्टार विजयको फिल्म ‘सरकार’ले दुई दिनमै कयौं रेडर्कहरु तोडेको छ । विजयको यो फिल्मले बक्स अफिसमा दुई दिनमै १०० (सय) करोडको आँकडालाई पार गरेको छ । यो फिल्म गत ६ नोभेम्बरबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आएको हो । यो फिल्मले अर्का स्टार प्रभाषको फिल्म ‘बाहुबली’को रेकर्डलाई नै तोडेको छ । विजयको ‘सरकार’ले तमिलनाडुको बक्स अफिसमा पहिलो दिननै ३० करोडको कलेक्शन..
अमेरिकामा छक्का पञ्जा–३ ले बनायो नयाँ रेकर्ड, ६४ शो को सफल प्रदर्शन
अमेरिका, २५ कार्तिक देशभित्र मात्र नभई विदेशमा पनि चलचित्र छक्का पञ्जा–३ को माग थेगी नसक्ने गरि बढेको छ। नेपाली चलचित्रको सबै भन्दा ठूलो बिदेशी बजार मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा छक्का पञ्जा-३ ले अपेक्षा गरे भन्दा बढीको व्यापार गरिरहेको छ। अमेरिकामा यस अघि रिलिज भएका छक्का पञ्जा, छक्का पञ्जा–२ र लूट–२ को तीन हप्ता सम्म चलेको रेकर्ड रहेको थियो भने अब यो रेकर्डलाई..
जब ब्रिटिस टिभी स्टार क्लो फेरीले तौलिया सम्हाल्न सकिनन् ...
एजेन्सी, २० कात्तिक ब्रिटिस टिभी स्टार क्लो फेरीले निकै लज्जास्पद परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । रियालिटी टिभी स्टार क्लोले आफ्नै लापरबाहीका कारण यस्तो स्थितिको सामना गर्नपुगेकी हुन्। नुहाइसकेपछि क्लो छातीमा तौलिया मात्र बेरेर घरबाहिनिस्किइन् । उनले कारबाट एउटा बक्स लिएर घरभित्र पस्न लाग्दा असन्तुलित भई बक्समा भएका सामान खस्न थाले । सामान समाल्छु भन्दा न त सामान नै सम्हालियो न त उनले..
बलिउड अभिनेत्री श्रुती हसनकी बहिनी अक्षरा हसनका 'अति निजी' फोटोहरू अनलाइनमा लिक
सोमबार, कार्तिक १९, २०७५ साल
एजेन्सी, १९ कात्तिक दक्षिण भारतीय सुपरस्टार कमल हसनकी छोरी तथा बलिउड अभिनेत्री श्रुती हसनकी बहिनी अक्षरा हसनका केही अत्यन्तै निजी फोटोहरु इन्टरनेटमा लिक भएका छन् । सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेका फोटोमा अक्षरा हसन देखिन्छिन् । यी तस्वीर एकदमै निजी छन् । अहिलेसम्म यो प्रस्ट भइसकेको छैन कि यी फोटोहरु अक्षराकै हुन् वा यी फोटोहरु एडिट गरिएका हुन् । केही तस्वीर इन्टरेटमा भाइरल..
अक्षय कुमारले भने - ‘२.०’मा जति मेकअप अहिलेसम्मको जिन्दगीमा कहिल्यै गरिनँ
काठमाडौँ, कार्तिक १८ । बलिउड र साउथ इन्डस्‍ट्रीका दुई ठूला सुपरस्‍टार अक्षय कुमार र रजनीकान्तको फिल्म ‘२.०’ को ट्रेलर रिलिजसँगै सुपरहिट भएको छ । ट्रेलरमा देखिएको जबरजस्त भिएफएक्‍स र एक्सन सिनलाई दर्शकले निकै तारिफ गरेका छन् । हिन्दी, तमिल र तेलगु भाषामा रिलिज भएको ट्रेलरमा अक्षय खतरनाक लुक्समा देखिएका छन् । ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा अक्षय कुमारले शनिबार भने, ‘‘२.०’ मा मैले आफ्नो भूमिकाका..
यी हुन् बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाको ड्रीम ब्वाय, उमेरको फरक नै १३ वर्ष !
एजेन्सी, १६ कार्तिक पछिल्ला ८ वर्षदेखि बलिउडमा क्रियाशील अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले पहिलो पटक आफ्नो बलिउड क्रशलाई लिएर आफ्नो ड्रीम ब्वायबारे बताएकी छन् । सोनाक्षीले हालै एक फ्याशन म्यागजिका लागि फोटोशूट गरिन् । सो सोही म्यागजिनमा अन्तर्वार्ता पनि दिएकी छन् । अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो जीवनसँग जोडिएका केही कुरा सार्वजनिक पनि गरेकी छन् । उनले बलिउडमा आफ्नो पहिलो क्रश ऋतिक रोशन रहेको बताइन् ।..
सैफ अली खानकी छोरीको पहिलो फिल्ममै हट किस सिन, यस्तो छ ‘केदारनाथ’को टिजर
एजेन्सी, १४ कार्तिक २०७५ सुशान्त सिंह राजपुत र सारा अली खानको फिल्म ‘केदारनाथ’को टिजर रिलिज भएको छ । फिल्म यही डिसेम्बर ७ मा रिलिज हुँदैछ । सैफ अली खानकी छोरी साराको यो पहिलो फिल्म हो । यसका अलावा सारा रोहित शेट्टीको निर्देशनमा बनेको फिल्म सिम्बामा रणवीर सिंहसँग देखिँदैछिन् । सिम्बा डिसेम्बर २८ मा रिलिज हुनेछ । २०१३ मा केदारनाथमा आएको भयानक प्राकृतिक..
अरवाज खानलाई झट्का, अर्जुन कपुर र मल्लाइका अरोराले आगामी वर्ष विवाह गर्ने
एजेन्सी, १३ कार्तिक बलिउडमा अहिले विवाहको लहड चलिरहेको छ। पछिल्लो समय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र अभिनेता अर्जुन कपूरको विवाहको खबर चर्चामा आइरहँदा अभिनेत्री मल्लाइका अरोरा र अभिनेता अर्जुन कपूरको विवाहको खबर बाहिरिएको छ। भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार, अर्जुन कपूर र मल्लाइका अरोरा खानले आगामी वर्ष विवाह गर्ने भएका छन्। अर्जुन र मल्लाइका विगत दुइ वर्ष देखि प्रेम सम्बन्धमा छन्। मल्लाइकाको सम्बन्ध विच्छेद हुनुमा..
‘छक्का पन्जा ३ʼको वेजोड प्रस्तुति र नयाँ रेकर्ड : दीपक–दीपा
काठमाडौं १२ कात्तिक ‘छक्का पन्जा ३ʼ नेपाली चलचित्रको इतिहासमै सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र बनेको छ । प्रदर्शनको तेस्रो सातामा लाग्दा पनि चलचित्र हेर्न हलमा दर्शकको भीड छ । यसरी हेर्दा तेस्रो श्रृङ्खलाले अघिल्ला दुई श्रृङ्खलाको रेकर्ड तिहारअघि नै तोडेर नयाँ व्यापारिक रेकर्ड राख्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । असोज २४ गते दशैंको घटस्थापनाबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले आफ्नै रेकर्ड तोडदै नयाँ किर्तिमानी बनाएको हो ।..
दीपिका-रणवीरको बिहेका निम्तो पाउने यि चार ‘भाग्यमानी’ बलिउडका सुपरस्टार ...
एजेन्सी, ११ कार्तिक बलिउड जोडी दिपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको बिवाह मिति सार्वजनिक भइसकेको छ । उनीहरु आगामी नोभेम्बर १४ मा पति-पत्नी बन्दैछन् । यतिबेला यो जोडीको बिहे कहाँ र कसरी हुनेछ भन्नेमा भारतीय मिडियाको आमचासो छ । केही मिडियाले जनाएअनुसार प्रमुख वैवाहिक समारोह सानो पारिवारिक जमघटमा गर्ने तयारीमा छन् दिपिका र रणवीर । उक्त समारोहमा बलिउडका केवल चार जनालाई निम्तो पुगेको..
जाहन्वी कपुरलाई ठूला-ठूला प्रोजेक्टबाट अफर, बरुण धवनको जोडी बन्दै !
एजेन्सी, ८ कार्तिक चलचित्र ‘धडक’ मार्फत यसैबर्ष बलिउडमा प्रवेश गरेकी नायिका जाहन्वी कपुरका लागि अब ठूला-ठूला प्रोजेक्टबाट अफर आउन थालेको छ । जाहन्वीलाई करण जोहरले बनाउन लागेको चलचित्र ‘तख्त’बाट अफर आइसकेको छ । तर, अब उनी अर्को एक नयाँ चलचित्रमा काम गर्दैछिन् । निर्देशक शशांक खेतान नयाँ चलचित्रको निर्देशन गर्दैछन् । थ्रिलर कथामा बन्न लागेको यो चलचित्रका लागि नायक बरुण धवन फाइनल भएको..
Results 550: You are at page 8 of 19